University of South Australia - kudzidza kunze Kwenyika. Iva remarudzi
guta : Adelaide
Musakanganwa kuti kurukura University of South Australia
Kunyoresa pana University of South Australia
UniSA ndiye rokuAustralia Yunivhesiti zvebhizimisi uye ari munyika yose-yakataura, munharaunda-kuroorana urongwa hwakatangwa pamusoro hunyambiri nenheyo zvakarurama uye kunaka.
With kupfuura 32,000 vadzidzi, yunivhesiti iri South Australia guru uye akanga yandaipuwa 25fung muna QS World University Rankings nokuda nemasangano pasi 50 makore ari 2015.
UniSA anopa zvirongwa dhigirii kuyambuka-siyana kusanganisira bhizimisi, mutemo, dzidzo, unyanzvi uye sayenzi nemagariro, utano sayenzi, ruzivo rwokugadzira, engineering zvakatipoteredza. A dzinokwana 88 muzana UniSA kudzidza vakaongororwa mu 2014 vakanga inogutswa unhu chirongwa chavo.
Paavhareji mumakore mashanu apfuura 90 muzana UniSA kudzidza ndichienda kubasa yakazara vanoshanda vari nyanzvi rinotambudza mukati memwedzi mina kupedza dhigirii kwavo
Tinotenda mukurumbira yunivhesiti iri vakatsunga zvikurukuru nokuda unhu kudzidza ayo, uye vanozvikudza kuti kupfuura 90 muzana kudzidza kwedu zvino mubasa renguva yakazara vanoshanda mune mabasa nyanzvi mukati memwedzi mina kupedza madhigirii vavo.
UniSA harisati akaita zvakasimba akazadzisa mikana zvaipiwa zvirongwa zvedu zviri kuwanikwa kuti siyana siyana vadzidzi uye pfungwa uye nokukurukura rwakakonzera mumakore edu nyika-yokutanga paIndaneti kubvunza kutanga unijam zvaikosha kweShanduro 'Kuyambuka Horizon', yedu inokosha kuita 2013-2018, izvo akaudza nenzvimbo yedu uye kukura.
kuzvipira kwedu kuna zvakaisvonaka iri mumatauriro caliber renyanzvi edu uye vaongorori. Kuwanda UniSA tsvimbo ine doctorate zvinodiwa yakura zvinoshamisa uye 73 muzana emushandi yedu zvino kuchengeta miteva.
UniSA zvakaratidzwa, hwakadzama muna Horizon 2020, ndechokuti chichava aitungamirira Contributor kuAustralia rine zvakanakisisa dzidzo hurongwa munyika, kutsigira nyika yakanakisisa vakadzidza uye kupfuura dzaungagona, cohesive uye inogona kuenderera vanhu.
Zviri chinangwa chedu kuti 2020, UniSA richatsikwa kunorondedzerwa kwayo:
Mutsindo zvaitika pakudzidza uye unhu uye hunova ruzivo mudzidzi
Kudzidza’ akagadzirira basa, anochinjika yavo, uye mupiro yavo sezvo munyika yose vanokwanisa nyanzvi
Kuzvipira zvakarurama uye kunaka, unowedzera mumwe mumamiriro ezvinhu inozivikanwa kurerutsa zvinodiwa
nexus Strong pakati pakudzidzisa uye tsvakurudzo
World-kirasi tsvakurudzo masumbu, uye inonakidza, tsvakurudzo-ndichibvunza tsika
Itsva dzokupedza nemagariro, zvoupfumi, enyika uye kwesayenzi matambudziko
Wandei uye rokusika mupiro nebudiriro uye zvakanaka rudzi
Agility uye kukwanisa kuchinja kuvaka uye kuramba zvibereko kudyidzana pamwe indasitiri, zvebhizimisi uye munzanga
High-kuita tsvimbo uye nomukurumbira dzakawanda vadyidzani
Kutsungirira uye kungoreva zvinobatsira ukama wayo yose alumni
pfungwa Strong seboka chinangwa.
Division Utano Sciences
School of Pharmacy uye Medical Sciences
Division Dzidzo, Arts uye Social Sciences
School of Art, Architecture uye Design
School Muchikurukurirana, International Studies uye Languages
School of Psychology, Basa Social and Social Policy
Weboka Information Technology, Engineering uye Zvakatipoteredza
School of Information Technology uye akarongeka Sciences
School of Natural uye Built runyararo
The University of South Australia yakaumbwa 1991 pamwe kwemapazi yeSouth Australian Institute of Technology (ZIVAI) pamwe vatatu pazvikoro (Magill, Salisbury uye Underdale) of South Australian College of Education Advanced (sACA). Maviri dzimwe SACAE pazvikoro, City uye Sturt, vakanga akabatanidzwa paYunivhesiti Adelaide uye Flinders University azvaitwa. To aimbova SACAE pazvikoro pamusoro Magill, Salisbury uye Underdale, SAIT akawedzera kwemapazi yayo pazvikoro matatu City East, The Levels (zvino kuzivikanwa Mawson Lakes) uye Whyalla.
Salisbury kembasi yakanga yabva mu 1996, asi pakutengeswa kwazvo Waiitwa makore mazhinji litigation. mu 1997, mumwe kembasi mutsva wakavhurwa pana City West. mu 2005, ari pazvivako pana Underdale yakavharwa sechikamu Blueprint 2005 purojekiti, uye zvirongwa zvayo vakayerera dzimwe pazvikoro. Minamato vachiri rigare Underdale akadai Document Services. Blueprint 2005 kwaisanganisirawo anoverengeka zvivako zvitsva, Kunyanya panguva City West uye Mawson Lakes.
The South Australian School of Arts anogona kuronda nhoroondo yaro kudzokera 1856 uye kupayona basa Charles Hill uye H. P. dakashwa, kuburikidza hworugare kutevedzana kwemazita uye kuchinja kusimbisa. Zvinogona vanozviti mumwe mukuru unyanzvi muzvikoro Australia, uye mukuru wevanhu unyanzvi chikoro. Ona South Australian School of Design nokuda zvakadzama.
The South Australian School of Arts, ane chikoro hwakagadzwa mukati weboka Education, Arts uye Social Sciences, anopa zvikuru nomukurumbira uye zvinokosha ziso Arts bhezari muAustralia, ari Gordon Saturday Scholarship.
Iye South Australian College of Education Advanced yakaumbwa 1982 pamwe kwemapazi Colleges mashanu Education Advanced. Adelaide CAE, Hartley CAE, Salisbury CAE, Sturt CAE uye Torrens CAE inotenga akava Adelaide (pedyo kuna Adelaide University), Magill, Salisbury, Sturt (Chaizvoizvo ari Bedford Park, pedyo kuti Flinders University) CAE uye Underdale.
Hartley CAE akanga uyewo aumba kubva 1979 kwemapazi Murray Park CAE uye Kingston CAE.
The South Australian Institute of Technology aiva sangano dzidzo pamwe 3 pazvikoro muna Adelaide, SA. Pasi zvinhu hurumende dzidzo munyika 1991 kukapiwa wokusarudza kubatanidzwa nomumwe yakanga ichangoumbwa TAFE SA kana South Australian College of Education Advanced kuumba University of South Australia. Rakanga munoremekedza dzaunogona kuiita kukodzera zvakajeka chete kana tsika.
Unoda kurukura University of South Australia ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
University of South Australia pamusoro Map
Photos: University of South Australia pamutemo Facebook
University of South Australia wongororo
Join kukurukura pamusoro University of South Australia.